Ogologo Ogologo Teftcopic Carbon Fiber Ogologo 55ft Na-enwe Nhicha nhicha dị elu
Ogwe osisi nhicha dị elu bụ igwe nke na-eme ka mmiri dị elu nke mmiri mgbapụta dị elu na-emepụta iji kpochapụ elu nke ihe ahụ site na ngwaọrụ ike. O nwere ike ihichapụ unyi, sachaa ya, iji nweta nzube nke ihicha elu ihe ahụ. N'ihi na ọ bụ iji kọlụm mmiri dị elu na-ehicha unyi, nhicha dị elu bụkwa otu n'ime ụwa a ghọtara dị ka usoro kachasị nhicha sayensị, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi.
Nnukwu nrụgide Telescoping carbon fiber na-eguzogide ọgwụ maka Ogige Ugbo
12m Nrụgide oru faiba glaasi Telescopic osisi maka elu nsogbu nhicha
3k / 6k / 12k carbon eriri telescoping okporo osisi maka nnukwu nsogbu nhicha na sooks
Nhọrọ dị iche iche dị iche iche dị elu, ma na-achọpụta ịdị mma ngwaahịa, na-eme ka mma nke okporo osisi dịkwuo elu.
Mkpanaka ndị a na-amị amị dị mfe ma nwee ike kpochie ha n'ogologo ọ bụla, nke dị mma maka ngwa ọ bụla ebe kọmpat nchekwa na ogologo mgbatị dị mkpa.